Chineke Nyere Iwu Banyere Ịdị Ọcha Tupu Ndị Sayensị Amata Uru Ọ Bara
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Azerbaijani Belize Kriol Bicol Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Javanese Kabuverdianu Kannada Kikamba Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kongo Korean Latvian Lingala Lithuanian Luo Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mongolian Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Nepali Niuean Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Portuguese (European) Punjabi Rarotongan Romanian Russian Russian Sign Language Samoan Sango Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tamil Telugu Thai Tigrinya Turkish Twi Tzotzil Ukrainian Urdu Urhobo Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Vietnamese Waray-Waray Welsh Yoruba
Obere oge tupu ụmụ Izrel abanye n’Ala Nkwa ahụ, n’ihe dị ka puku afọ atọ na narị ise gara aga, Chineke gwara ha na ya ga-eme ka ha ghara ịrịa “ọrịa ọjọọ niile” ndị ha ji anya ha hụ n’Ijipt. (Diuterọnọmi 7:15) Otu ụzọ o si mee ya bụ inye ha ntụziaka gbasara ịdị ọcha, na otú ha ga-esi na-egbochi ma ọ bụ na-akwụsị ọrịa. Dị ka ihe atụ:
Iwu e nyere mba ahụ kwuru na ha kwesịrị ịna-asa ahụ́ ma na-asụ ákwà ha.​—Levitikọs 15:​4-27.
Chineke gwara ha gbasara nsị mmadụ, sị: “Ị ga-enwe ebe ị ga na-eje mposi ná mpụga ebe ị mara ụlọikwuu, ị ga-apụkwa gaa ebe ahụ. Ị ga-eji mbazụ, ya na ihe agha gị, ọ ga-erukwa na mgbe ị ga-etukwuru ala n’ebe mpụga ahụ, ị ga-eji ya gwuo ala ma tụgharịa kpochie nsị gị.”​—Diuterọnọmi 23:​12, 13.
A na-akpọpụ ndị e chere na ha na-arịa ọrịa na-efe efe iche ruo oge ụfọdụ. Tupu ha alaghachi, ndị a chọpụtara na ọrịa ha alaala ga-asụ uwe ha ma saa ahụ́ na mmiri wee dị “ọcha.”​—Levitikọs 14:​8, 9.
A na-akpọpụ onye ọ bụla metụrụ ozu aka iche.​—Levitikọs 5:​2, 3; Ọnụ Ọgụgụ 19:16.
Iwu e nyere ụmụ Izrel ọtụtụ afọ gara aga gosiri otú e kwesịrị isi na-agwọ ọrịa ma na-edebe ihe ọcha.
Ma mba ndị gbara ụmụ Izrel gburugburu adịghị ele ịdị ọcha anya ka ihe dị mkpa. Dị ka ihe atụ:
Ha na ekpofu unyi n’okporo ụzọ. Mmiri ndị e metọrọ emetọ, nri ndị mebiri emebi nakwa ụdị unyị ndị ọzọ mere ka ọtụtụ mmadụ rịawa ọrịa, kpatakwa ọnwụ ọtụtụ ụmụaka.
Ndị dọkịta oge ochie matụ ma ọ bụ ha amaghị gbasara ụmụ nje dị iche iche na-akpata ọrịa. Ndị Ijipt na-eji ọbara ngwere, nsị okwolo, òké nwụrụ anwụ, mamịrị na bred mara ebu agwọ ọrịa. Ihe ndị a agwọghị ọrịa ọ bụla, kama, o nwedịrị ike ịbụ na ha mere ka ọrịa ka njọ. Ha na-ejikarịkwa nsị mmadụ na nke anụmanụ agwọ ọrịa.
Ndị Ijipt butere ọrịa dị iche iche n’Osimiri Naịl nakwa n’ọwa mmiri dị iche iche n’ihi ụmụ nje ndị dị na ha nakwa n’ihi mmetọ e metọrọ ha. Afọ ọsịsa na ọrịa ndị ọzọ gbukwara ọtụtụ ụmụaka n’Ijipt n’ihi iri nri mebiri emebi.
Ma ụmụ Izrel nọgidere na-enwe ahụ́ ike n’ihi irubere Iwu Chineke isi.
Ihe Ndị Baịbụl Kwuru Gbasara Sayensị Bụ Eziokwu Sayensị na Baịbụl
Ihe O Kwuru Dabara n’Ihe Ndị Dọkịta Chọpụtara
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Chineke Nyere Iwu Banyere Ịdị Ọcha Tupu Ndị Sayensị Amata Uru Ọ Bara
Gịnị Ka Baịbụl Kwuru Banyere Ịdị Ọcha?
Ihe Ndị Ị Ga Na-eme Ka Ahụ́ Na-adị Gị Mma